Iwo mabhuku aMarta Robles, yakasarudzika kufamba kwekunyora pakati pechokwadi uye fungidziro | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Type, Mabhuku, Nhema nhema
Marta Robles mabhuku.
Marta Robles mutori venhau vekuSpain uye munyori (Madrid, Chikumi 30, 1963) ine nhoroondo refu kweanopfuura makumi matatu emakore muredhiyo, dzvanya uye terevhizheni. Semunyori, akazviratidza semunyori uye mumhando yemanoveli. Nekudaro, zvakati kurerekerei kumubairira mukati meakasiyana masitayera ezvinyorwa, nekuti rimwe remagariro ake anogara aripo pabasa rake rese kuita kwakawanda.
Chinyorwa chayo chekutanga chakabva muna 1991, Nyika iri mumaoko angu. Panguva iyoyo Robles anga atove kushandira magazini Nguva panguva ya1987, panguva imwe chete yaaipedza degree rake muIsainzi Sayenzi kuComplutense University yeMadrid. Kubva ipapo kuvapo kwayo kwagara kuri mune akasiyana midhiya akadhindwa senge Panorama, murume, mukadzi, the Vanguard Magazini, Elle o Chikonzero, kungodudza mashoma.
1 Trajectory uye mibairo
2 Yako isiri-ngano inoshanda
2.1 Ivo vakasarudzwa vemhanza
2.2 Tanga iwe
2.3 Ita zvaunotya
3 Novels uye mabhuku engano naMarta Robles
3.1 Zviso gumi nerimwe zveMaría Lisboa
3.2 Dhayari yemukadzi ane nhumbu makumi mana-chimwe chinhu
3.3 Luisa nemirazi
3.4 Asingasviki mashanu masentimita
Trajectory uye mibairo
Mabhuku ake anotangira pakutsvagisa kwezvakaitika kare kuenda kuzvinyorwa zvekunyepedzera uye zvinyorwa zvebhaibheri.. Akagamuchira iyo 2013 Fernando Lara Novel Mubairo we Luisa nemirazi. Saizvozvowo, akapihwa mubairo wakasarudzika we "Wakanakisisa wedu" paAragón Negro Festival 2019 - nekuda kwekupa kwake kumatare enhau dzekuparwa kwemhosva nekuda kwekugadzirwa kwemutikitivha Roures - uye neLetras del Mediterráneo 2019 Prize muboka reNhoroondo. Nekuda kweizvi, zvinoshamisa kuti Marta Robles anoenda asingaonekwe mu mitambo yematsotsi.
Ehezve, iyo mizhinji mibairo yake inosangana neredhiyo neterevhizheni. Zvese izvi zvave, chokwadika, nekuda kwenzvimbo dzisingaverengeke dzaakapa (mazhinji acho, akatungamirwa uye akaburitswa naiye) pasi pemhando dzakasiyana siyana dzinodzidzisa, dzekutandarira nedzetsika munzira dzakadai seTVE, Canal 10, Tele 5, Telemadrid, Canal Sur, Antena 3, Canal 7 uye Dkiss.
Saizvozvo, basa rake paredhiyo rave richizivikanwa zvakanyanya nekuda kwezvirongwa zvake paCadena SER, Radio Intercontinental, Onda Cero, EFE Radio, Punto Radio uye Es Radio (mune maviri apfuura semubatsiri).
Yako isiri-ngano inoshanda
Kunze kwezvataurwa Nyika iri mumaoko angu, mamwe mabhuku ake asiri ekunyepedzera ari Mukadzi wePSOE (1992), Iyo katarogu yeiyo Oceanographic Park yeValencia (2003), Madrid ini Marita (2011), Tanga iwe (2015) uye Ita zvaunotya (2016). Aya maviri ekupedzisira akagamuchirwa kwazvo nevatsoropodzi uye neruzhinji rwevanhu.
Ivo vakasarudzwa vemhanza
Marta Robles akwanisa kubata zvinobudirira hunyanzvi hwake hwekutapa mabhuku mumabhuku ake manomwe asiri echokwadi, pakati pawo Ivo vakasarudzwa vemhanza (1999) inomiririra nzira yayo yechisikigo uye isina kwazvakarerekera mukudzidza kwevakuru veSpain. Mune basa iri, Robles anoratidza maitiro ake chaiwo mubvunzurudzo nevarume gumi nevashanu uye vakadzi vana vakakurumbira munyika yezvemari yeSpain. Iwe unogona kuona mune zvinyorwa kuti anoburitsa sei hunhu hwakajairika mune vazhinji vevakabvunzurudzwa, sekutsvaga kwekudzivirira kana kukurudzira kukuru mukubudirira.
En Tanga iwe, Marta Robles anoongorora magariro evanhu anotsanangura kushamwaridzana yekukunda, kunyengera, kutaura kwemanzwiro uye kunyangwe kusavimbika. Iyo mhando yemanyoro-rondedzero pane yakanaka tsika inoenderana nezvinyorwa, maficha mafirimu uye audiovisual zvinyorwa, hunyanzvi uye pfungwa.
Kunze kwekuongororwa kwenzira dzekutaurirana, Tanga iwe ongorora "zvakavanzika tsika" zviripo mune chero nzanga. Aya macode, pane dzakawanda nguva, anogona kuve akatonyanya kukosha kupfuura iyo yakajeka mitemo yekuzvibata. Iye munyori anojekesa chinzvimbo chake pane kukosha kwekuziva nzira yekuzviratidza kuti udzivise kusazvibata uye edza kusvika panguva.
En Ita zvaunotya Robles anozvinyudza mukusagadzikana kwake uye pfungwa yekusagadzikana inoenderana nemamiriro emunhu (kunyangwe iye achibudirira kwazvo uye aine chivimbo pamberi pekamera). Chinangwa chemunyori hachisi chekuita kuti kutya kunyangarike, asi iro repakati meseji kudzidza kurarama nekutya uye kuva nemafungire ekugadzirira kunakidzwa noupenyu.
Novels uye mabhuku engano naMarta Robles
Zviso gumi nerimwe zveMaría Lisboa
Iri zita rakanyorwa muna 2001 iko kuunganidzwa kwenyaya gumi neimwe kunongedzera kukunakidzwa kwevakadzi gumi nerimwe. Mune nganonyorwa maficha enyaya chaidzo anonyanya kuzivikanwa. Neichi chikonzero, Robles anozviisa munzvimbo yeumwe neumwe wavo, achivatsanangudza nechiso uye neizwi rake. Mhedzisiro yacho ibhuku rinonakidza kwazvo rinoratidzira gumi nemana zvinokwanisika zvemukadzi aripo anotaurwa pasi pezita re "María Lisboa".
Mumiririri unosanganisira akawanda emavara, ma profiles, uye hunhu hwakakomberedzwa nekuoma kwevakadzi. Pakati peizvi panomira rusununguko, kuzviisa pasi, kusagutsikana, kushaya rubatsiro mukutarisana nehasha dzevarume, kushinga, kuzvipira, kuzviramba ... Zvinoongororawo hunhu hunopesana nevakadzi ivavo vanosarudza kunyengera kana kuzvinyudza mukufungidzira kuti vanzwe kudiwa. uye kudzorerwa. Inoratidza zvakare kuti vangani vanotsvaga kudzivirira kusangana nekusurukirwa.
Dhayari yemukadzi ane nhumbu makumi mana-chimwe chinhu
Iri bhuku kubva muna 2008 dhayari yemukuru ane makore makumi mana ekuberekwa uyo pamwe chete nemumwe wake - Jaime, 40 - anosarudza kubata pamuviri Makore gumi nemasere mushure mekuve nemwana wake wekutanga kubva kune waakambodanana Jaime anewo mwanasikana ane makore makumi maviri nemasere kubva kumuchato wake wekutanga. Kubata nhumbu kunochinja chinzvimbo chehukama hwako nemhuri yako, nemumwe wako uye kubasa.
Zvisinei, protagonist inosarudza kutarisana nemamiriro ayo matsva nekuseka uye isina kunyunyuta nezve rusaruro rwekunze… Kusvikira chiremba wemadzimai abvunza zera rake, ndosaka achitanga kubatika. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, kusachengeteka, kutya uye kushungurudzika zvinowanzoitika. Zvese izvo zvinoratidzwa zvinoshandurwa kuita anecdotes chete mushure memwedzi mipfumbamwe ye "kupenga" kwapfuura.
Mutsara naMarta Robles.
Yakanyorwa muna 2013, Iyo ingangodaro inonyanya kukosha bhuku raMarta Robles 'rekunyora basa, zvichiratidza shanduko. Izvi zvisati zvaitika akatanga Don Juan muna 2009 sezita risiri rekunyepedzera. Luisa nemirazi inotsanangura zvakaitika kuna Luisa Aldazábal, mukadzi wemazuvano anosarudza kuchinja zvakanyanya hupenyu hwake mushure mekupedza mwedzi mitatu ari pakoma.
Iye protagonist anokurudzirwa zvakanyanya nekusangana kwake nemunhu chaiye uyo afunga kuzvishandura kuita basa rekurarama rehunyanzvi. Uyu hunhu ndiMarchesa Casati, uyo anotungamira hupenyu hwake nenzira iyoyo sechimiro chekutaura akasununguka zvachose kubva kuchinyakare, pamberi penguva yake. Nekudaro, Luisa anokurudzirwa kuti achinje hupenyu hwake husina kusarudzika uye hwakajairika hwehupenyu kune rudo uye hunyanzvi hwekuda hunonyanya kukosha.
Asingasviki mashanu masentimita
Muna 2017 Marta Robles anotangisa mune ino tsotsi inoverengeka wevamwe vake vanonyanya kufarirwa vatambi kusvika zvino, Detective Roures. Iye aimbove mutori venhau vehondo ane kukundikana kwakaramba kuchimutungamira kuti awane raramo yake semuongorori wekusatendeka. Iyo rongero inoitika munzvimbo dzinoverengeka dzinotungamirwa nebonde, kunyengera, kubata, uye mifananidzo yakawanda inonzwika.
Ikoko, Misia Rothman anotamba mukadzi akanaka akaroora anowira pasi pechipenga chaArtigas, munyori anozivikanwa uye murwiri wemadzimai. Murume uyu anofungirwa kuti akaponda vamwe vakadzi vatatu. Pamusoro pezvo, hunhu hwaArtigas hwekutsoropodza hunomuita mhondi ingangoitika yaamai vaKatia Cohen, uyo anoenda kuRoures kuyedza kuburitsa chokwadi.
Asingasviki mashanu masentimita akaisa Marta Robles semugumo wekupedzisira we2017 Silverio Cañada Award mu Gijon Nhema Svondo. Gore rakapfuura, akapa (mukubatana) mukuvandudza bhuku iri Zvinonyadzisa Anthology yemifananidzo yekuona zvinonyadzisira (2016). Yake yazvino zvinyorwa zvekugadzira, Munyama (2018), yawana ongororo dzakanaka kwazvo uye kugamuchirwa kukuru pakati penhamba iri kuwedzera yevateveri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku aMarta Robles